गर्मीमा पुदिना खानुको स्वास्थ्य लाभ ! – MediaNP
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:१७0
पुदिना एक बहुगुणी औषधी हो । वर्षायामको सुरुवातसगैं यो निकै राम्ररी पलाएर आउने गर्दछ । विभिन्न औषधी तथा अचारको रुपमा प्रयोग हुने पुदिना एक स्वास्थ्यवद्धक वनस्पती हो । पुदिनाको दुई वटा जति पातलाई पानीमा उमालेर दैनिक चिया जसरी सेवन गरेमा तौल नियन्त्रण हुन्छ । धेरैले यसलाई चियाको रुपमा भन्दा पनि अचारकै रुपमा खान रुचाउँछन् । दाँत, मुख र पाचनप्रणालीमा समेत पुदिनाले निकै सघाउँछ । गर्मी मौसममा पुदिनाको सेवन गर्नाले कस्ता लाभ हुन्छ भन्ने बारेमा अझै पनि धेरैलाई जानकारी छैन् । पुदिनाको धेरैनै फाइदा भएको कारण यसलाई घरको गमलामा रोपेर पनि आफूले चाहेको समयमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । पुदिनको फाइदाहरु यसप्रकार छन्,
१.पेटमा भएको विषाक्त पदार्थलाई बाहिर ल्याउनको लागी पुदिनाले सघाई पेटसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समधान हुन्छ, जसको लागी पुदिनालाई चिया बनाएर सेवन गर्न सकिन्छ, सेवन गर्दा जहिले बिहान खाली पेटमा गर्नुपर्दछ ।
२.दैनिक रुपमा बाहिर हिड्ने व्यक्तिलाई खुट्टा पोल्ने समस्या हुन्छ, यस्तो समस्याबाट धेरै व्यक्तिहरु पिडित छन् । फ्रिजमा राखेको पुदिनालाई पिसेर खुट्टाको पैतलामा लगाउनाले तुरुन्त आराम मिल्छ ।
३.पेट पोल्ने समस्या भएकाले पुदिना, दहि, काचो आँपलाई पिसेर लस्सी बनाएर सेवन गर्नाले पेट पोल्ने समस्या समधान हुन्छ ।
४. टन्सिल भएकाले पुदिनाको रसमा सफा पानी मिलाएर कुल्ला गर्नाले निको हुन्छ ।
५.पुदिनको अचार बनाइ दैनिक हल्का भोजनमा सामेल गराएमा शरीरमा कुनैपनि किसिमको समस्या देखापदैन् । मरिज, नुन, जीरा, छगडा, किसमिस मिलाएर पिसेर यसलाइृ चटनी बनाई सेवन गरेमा कुनै पनि रोगले आक्रमण गर्ने सम्भावना रहदैन् ।
बच्चाको डर भगाई आत्माविश्वास बढाउन यी चार योगासान !